Warbixintii hayada Iskuuladka ee sannadka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Pontus Lundahl/Scanpix.
Warbixintii hayada Iskuuladka ee sannadka
Warbixin ku saabsan xaalada iskuulada
La daabacay fredag 1 juni 2012 kl 08.05
Warbixinta sannadlaha ah ee ay hay'ada dabagasha iskuulada "Iskulspektion" ugudbisay dowladda maantay ayaa ka muujinaysa sawir mogdiya siday u egtahay xaalada iskuulada dalka marka loo fiiriyo sida la doonayey in ay ahaato. Tobankii ardey hal ayaa ka cabsi qaba tegitaanka iskuulka, wax ka badan kun ardey ayaa dhameeya kalaaska sagaalaad ayagoon ka qaadan shahaado hal maado, waxyaabo badan oo u baahan xalin waxaa masuuliyadeeda la saara ardeyda, dhamaan waxyaabahaasi waxay kamid yahiin gabaabsiyada ka jira iskuulada oo warbixinto farta ku fiiqday.
Madaxa skolinspektionen Ann-Marie Begler ayaa sheegtay in siyaasiinta degmooyinka qaarkood aysan hadafkooda ahayn in ardeydo hesho shahaadooyin wanaagsan.
- Waxaan aragnaa in siyaasiinta degmooyinka hadaf ka dhigtaan in boqolkii 80 ay ardeydo qataan shahaadooyin buuxa, higsashada noocaas ah waxay hoos u dhigaysaa rajada ardeyda, waxay sidoo kale hos u dhigaysa rajada macallimiinta la shaqaaleeyey.
Hadafka noocaan oo kale ah ma ahan wax la aqbali karo. Qaynuunka waxbarasho waxa uu sheegayaa in ardeydo xag u leeyahiin in ay helaan shahaado. Waana suurta gal in ardeyda gacan lagu siiyo sidii ay u heli lahaayeen shahaadoyiin fiican, ayey tiri Ann-marie Begler.
Warbixinta sannad laha ah ee skolinspektionen waxa ku jira xaqiiqo iyo dooda looga hadlayo sababta ay iskuulo badan u muujinayaan habacsanaan iyo qaladad badan marka la fiiriyo sida uu qabo sharciga iskuulka oo dalbanaya in dhamaan ardeydo helaan shahaadooyin maadooyinka oo idil.
Ardeyda aan shahaadada helin
1075 ardey ayaa sannadkii hore ka baxday sagaalaadka ayaga oo aan ku helin dhamaan maadooyinka wax shahaado ah, sidoo kalena dhor boqol oo ardey kalaaska todobaad iyo sideedaad kabaxday ayaa shahaado la'aan. Saamaynta ay tan ku yeelanayso shaqsiga sida ay sheegtay warbixintu waxa weeyan in liidasho iyo IN ay suuqa shaqado ku adkaato qofka taas oo u keeni karta dhibaatooyin nafsiyan ah.
Ardeyda aan dugsiga sare soo galin ayaa sannadba sannadka ka danbeeya soo badanaya, gabaabsiga ugu weyn oo ka jira dhanka iskuulkana waxay warbixinto ku tilmaantay in xalka laga raadiyo waxa oo ardeygu qaban karo iyo waxa uu guriga qaban karo. ayada oo badanaa lagarab maro waxa oo iskuulka ku caawin karo ardeyga.
Skolinspektionen ayaa u dhaleecaysan in macallimiinto aysan u jeedin hamiga waxbarshao ee ardeyga oo ay jilciyaan maadada ay dhigaan taas oo keenta in ardeygo ka xiiso dhaco.
- Markaan waydiinay ardeyda waxay inta badan noo sheegen in macallimiinto aaminsanayn in ay wax yaqaaniin, sharuuda macallinku ku xiro ardeydana ay tahay kuwo aad u hooseeya. Xaaladaas oo kale ma keenayso xiisogelin waxbarasho. Aaminaad xumado waxay dhalisaa natiijo aqooneed oo liidata, ayey tiri Ann-marie Begler.
Kalabar macallimiinta ayaa sheegay in ay ardeydoodo u baahan yahiin saacidaad dheerad ah lakiin aysan helin. maamulada iskuulka iyo dadka masuulka ka ah ayaa howshooda beerdareeyey ayaa lahu yeri warbixinta.
Inta badan dugsiyada hoose, kuwo sare iyo waxbarashada dadka waaweyn ayaa muujinaya natiijo waxbarasho oo aad u hoosaysa. Sidoo kale gabaabsi ayaa ka jira sida lagu xaliyo cayda iyo dhibaatooyinka ay isku gaystaan ardeydo. Tobankii hal ayaa ardeyda mararka qaar ka cabsada in uu iskuulka aado, halka sadex meelood ardeyda ay sheegayn in ay isku geystaan xumaan ayada oo dadka waaweyn waxba ka gilgilan. Skolinspektionen ayaa tilmaamay in macallimiinta iyo maamulayaasha dugsiyada aysan wax weyn u arag cayda iyo aflagaadada ay ardeydo isku gaystaan amaba waxay dusha ka saraan eeda ardeygii dhibka loo geystay.
Dhamaan iskuulado ma maliintaan!
Warbixinta sannad laha ah ee skolinspektionen ayaa ka bixinaysa sawir aad u madoo dhibaatooyinka ka jira iskuulada, lakiin iskuulado meel kasta kama liitaan ayey Ann -marie Begler oo ah agaasimaha guud ee Skolinspektionen.
- Waxaan la kulanaa iskuulo ay dhamaan ardeydo soo gasho dugsiyada sare oo dugsiyada sare ka bacdii ay ardeydo hesho shaqooyin ama waxbarashada sare ee ay ku haminayaan. Iskuulado waa kuwo kala qaybasan, qaar waxaa jira aad u liita iyo qaar aad u wanaagsan ayey tiri Ann-marie Begler oo u waramaysay laanta warka ee Ekot. Bengt Hansell oo ka tirsan Ekot ayaa warbixintaan diyaariyey.